Archive du 20161229
Fifidianana 2018 Mandrafitra ekipa i Dada
Nihaona nandritra ny ora vitsy teny Faravohitra omaly Atoa isany Marc Ravalomanana sy Yvan Andrianasandratriniony.
Vondrona MAPAR Nizaka ny mafy ny taona 2016
Vondrona politika azo lazaina ho nizaka ny mafy tamin�ireo fikambanana politika rehetra teto amin�ny firenena tamin�ity taona ity ny vondrona politika MAPAR na Miaraka Amin�ny Prezida Andry Rajoelina.
Tanora TIM Mijoro isaky ny Boriborintany ao Toamasina
Niezaka nametraka sampana isaky ny Boriborintany miisa dimy ao Toamasina ny Tanora Tiako I Madagasikara, tarihin-dRazanadrakoto Tokiniaina, ho fihatrehana ny taom-pifidianana amin�ny 2018.
Fahanginan'i Andry Rajoelina Mampiahiahy ...
Mandeha ny resaka ankehitriny fa misy indray ny fikotrehana fanonganam-panjakana.
Fianakaviana Ravalomanana sy Rajoelina Betsaka no liana�
Maro amin�ny Malagasy no liana sy manara-baovao amin�ny fiaimpiainana sy zavatra ataon�ireo filoham-pirenena eto amintsika sy ny fianakaviany, indrindra fa mandritra izao vaninandro fety izao.
Fampihavanam-pirenena Tsy mety masaka
Ny taona 2002 no efa nitsangana ilay CRN na ny Komitin�ny fampihavanam-pirenena.
Antoko MFM Mandala ny fifidianana ahazoana fahefana
Misy ary mijoro tanteraka ny Antoko MFM. Nanamafy izany ny tao Antsirabe ka nitafa tamin�ny mpanao gazety ho fanamarihana ny faha-44 taona nijoroany ny alarobia 27 desambra teo.
Taratasin�i Jean Vakansy ve e ?
Miarahaba Jean a ! Ianareo moa efa miala sasatra dia tsy mety hiresaka intsony koa ? Sambatra ianareo kanefa ny fihinanana efa tsy vitan�ny tsy ho very fa mbola mihoapapana ihany.
Antananarivo Renivohitra Hiezaka ny tsy hanala mpiasa
Miatrika fivoriana ara-potoana ny filankevitra Monisipaly mandinika ny vinavinan-tetibola taona 2017.
Asa fanaovan-gazety Nanahirana tamin'ny 2016
Ankoatra ny adihevitra maro nandresen-dahatra ny antenimiera roa tonta sy ny teo anivon'ny firenena mikambana ary ny masoivoho amerikanina momba ilay sata mifehy ny fifandraisana na ny �code de la communication�,
Sefo Fokontany Nisitraka tambinkarama 3 volana
�Aleo misy toy izay handry fotsy !�. Izay no nambaran�ireo sefo fokontany raha avy nandray ny tambin-karamany tao amin�ny biraon�ny Faritra
�Carte Grise biom�trique� Amin�ny 31 martsa 2017 no fe-potoana farany
Na dia nisy aza ny fanemorana ho amin�ny 31 martsa 2017 ny daty farany fahazoana manolo ny taratasy fahazoan-dalana mitondra fiarakodia mahazatra ho lasa � Permis de conduire Biometrique �, dia mbola filaharambe hatrany no hita eny Ambohidahy.
Vahaolana amin�ny fahatapahan-jiro Andrasana ny fanapahan-kevitra
Maro ny safidy efa natolotra ny orinasa Jirama ho famahana ny olana mikasika ny fahatapahan�ny rano matetika, indrindra ny fahatapahan-jiro lavareny niha mafy tamin�ity taona ity.
SOS Village d�Enfant - Toamasina Mitohy ny tolo-tanana ataon�ny Rema Tiop Top
Tsy nanadino ireo zaza kamboty tezaina eo anivon�ny ivontoerana �SOS Village d�Enfant� Mangarano Toamasina ny Rema Tiop Top Tanandava Tsararivotra, notarihin�ny tale Anthony Knott ka nanolotra fanomezana nahafahan�izy ireo nilanonana.
Vondrona ANEFFA Nankasitraka ireo mpampianatra zokiolona
Tsy nanadino ireo mpampianatra zokiolona miisa 40 mpikambana ao aminy ny vondrona Aneffa tarihin�ny filohany Randrianasolo Lova amin�izao ankatoky ny fetin�ny faran�ny taona sy ny taom-baovao izao.
Ataon�ny tazom-pahefana mivika !
Dia sanganehana indray ny rehetra fa ao anatin�ny fotoana tokony hisian�ny fitoniana sy tsy hisainana firy ny politika efa ho dridrangilo eto amin�ny firenena mihitsy no vao mainka hampanenoan�ny sasany ny anjomara sy ny siotsiokan�ny rivotra politika.